अनमोलसँग दयाहाङको टक्कर, को भन्दा को कम ? (भिडियो सहित)FilmyFanda: Nepal's No. 1 Entertainment news portal site
अनमोलसँग दयाहाङको टक्कर, को भन्दा को कम ? (भिडियो सहित)
फिल्मी फण्डा । स्वर्गिय नायक श्रीकृष्ण श्रेष्ठको निधनपछि पर्दामा नदेखिएकी नायिका स्वेता खड्काले निर्माण गरेको फिल्म कान्छिको प्रदर्शन मिती अन्तत नसर्ने पक्का भएको छ । नायिका श्वेताले आफुले उद्घोष गरेको मितीमा फिल्म कृ आफै आउन लागेको हुनाले आफुले प्रदर्शन मिती नसार्ने निणर्य गरेकी बताएकी हुन् । यस कारण अन्तत फिल्म कृ र कान्छिको प्रदर्शनले फिल्मको व्यवसायिकतामा मात्र असर पार्दैन पछिल्ला समयका सुपरस्टार अनमोल केसी र स्टार दयाहाङ राईको स्टारडमको टक्कर पनि हुने भएको छ ।
यता कृ निर्माताद्धय सुवास गिरी र भुवन केसीले पटक पटकको प्रदर्शन मिती फेरबदलसँगै माघ २६ नै अन्तिम प्रदर्शन मिती तय भएको बताएका छन् । माघ २६ नेपाली दर्शकहरुको लागि मात्र रोचक छैन नेपाली कलाकर्मीहरुको पनि यसमा रोचकता बढ्ने देखिएको छ । दुई फिल्मका ठूला ब्यानरले कसलाई घाटा भने विषयमा मात्र नभई फिल्मका कलाकार र निर्देशक बिचको टकराव समेत यसले निम्त्याउने निश्चित देखिन्छ ।
नायक दयाहाङ राईको फ्यानहरु प्नि नेपाली फिल्मी बजारमा राम्रो छन् तर उनको फ्यान फलोअर्सले अनमोलको फ्यानफलोअर्सलाई असर पार्न सक्छ की सकदैन भने मूख्य विषय बनेको छ । झन्दै २ बर्ष देखि अनमोलको फिल्म नेपाली दर्शकहरुले कुरीरहेका छन् । यता नायक दयाहाङको हप्तै पिच्छे र महिनै पिच्छे फिल्म रिलिजले दयाहाङको फिल्मलाई प्रथामिकता होला भने त्यास्तो कुनै संभावना देखिदैन । निर्देशक आकाश अधिकारी फिल्म निर्माताहरुको हक र हिटका लागि लड्दै आईरहेको संस्था चलचित्र निर्माता संघका अध्यक्ष समेत हुन् । उनै निर्माता संघका अध्यक्ष आकाश अधिकारीले निर्देशन गरेको फिल्म कान्छिले निर्मातालाई सुरक्षित बनाउँछ कि बनाउँदैन भने चूनौती आकाश माथि पनि लागेको छ ।
कृ रिलिजपूर्व सुरक्षित फिल्म मानिएको निर्माण पक्षको दावी छ । यता कान्छिलाई रिलिजले फिल्मको लगानी सरक्षित हुन्छकी हुदैन भने अर्को प्रश्न पनि छ । फिल्मको नायकहरुमा जस्तै नायिकाहरुमा पनि महत्व रहेको छ । कृ की नव नायिका अदिती बुदाथोकीको चर्चा यतिखेर निकै बढेको छ । उनको फोटो सुटका कारण पनि उनको चर्चा चुलिदै गएको छ । फिल्म कृ बाटै उनी संभावना बोकेको कालकारको रुपमा देखिएकी छिन् ।
यता कान्छि निर्माता तथा नायिका स्वेता खड्का फिल्म कोहिनुर पछि देखिएकी छैनन् । स्वर्गिय श्रीकृष्णको निधनपछि नेपाली पर्दामा नदेखिएकी श्वेतालाई पर्दामा हेर्न चाहनेहरुको पनि राम्रो उपस्थिती फिल्मी बृतमा छ । यस कारण फिल्म कृ र कान्छिमा कलाकार, निर्देशक, व्यापारमा मात्रै प्रतिस्पर्धा नभई ब्यानरमा पनि प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । फिल्मका निर्माण टिमहरुले एक र अर्कोमा कुनै प्रतिस्पर्धा नभएको बताए पनि यी दुई फिल्मको प्रतिस्पर्धा माघ २६ पछि यथेष्ट रुपमा देखिने निश्चित छ ।